Indostrian'ny fitsaboana amin'ny rano
Pulp & Indostrian'ny taratasy
Tongasoa eto amin 'ny tranonkala
Koa Nahoana OuBo Chemical
Manokana & Fahaizan'ny Trondro
Manokana izahay tamin'ny mpanamboatra Polyacrylamide ny 8 taona amin'ny fifaninanana ambony kalitao sy ny vidiny. Ny ekipa ara-teknika anjara amin'ny mialoha ny varotra, ny varotra sy Ankehitriny-varotra dingana mba hanohana anao ao amin'ny faritra mivohitra, vokatra fanaovana fitiliana sy Ankehitriny-varotra fanompoana. Mampanantena isika: matihanina ekipa teknika mba hanampy anao hanao ny safidy tsara.
Ny ekipa ara-teknika anjara amin'ny mialoha ny varotra, ny varotra sy Ankehitriny-varotra dingana mba hanohana anao ao amin'ny faritra mivohitra, vokatra fanaovana fitiliana sy Ankehitriny-varotra fanompoana. Mampanantena isika: matihanina ekipa teknika mba hanampy anao hanao ny safidy tsara.
805Room, No.13, Zone B, Wanda Mansion, Qingdao, Faritanin'i Shandong
Ny fiantraikan'ny lanjan'ny molekiola amin'ny polyacry...
Fitsaboana rano maloto indostrialy, mazava...
Ny endri-javatra ny flocculant
Cationic polyacrylamide ho an'ny sludge déte...
Ny polyacrylamide cationic ho an'ny sira avo dia ...
© Copyright 2011-2020 Oubo Chemical Zo rehetra voatokana.